Camei 2020 fanofanana sy fianarana fitantanana fitantanana | Camei Ele & Stationery
Manitatra ny rakitra
Camei 2020 fanofanana sy fianarana fitantanana fitantanan-draharaha
Ho fanamafisana amin'ny fomba mahomby ny fitantanana fitantanana ny mpiasa rehetra ao amin'ny orinasa, ary manome an-tsarimihetsika feno amin'ny fitarihana sy ny famporisihana ary ny famerana ny fanombanana ny fampisehoana, tamin'ny 28 Jolay, nikarakara ny fandefasana ny efitrano fivoriana tao amin'ny rihana faha-3 ny orinasa. biraon'ny birao faha-3 ao amin'ny Yuanxiang Street, Jiangnan High-teknolojia zaridaina, Quanzhou City [2020 Fiofanana sy fianarana fanabeazana), maherin'ny 20 antonony sy zokiolona avy amin'ny Jiamei Stationery no nandray anjara tamin'ity fiofanana ity.
Ho an'io fiofanana io dia nanasa an'Andriamatoa He Huan sy Mr. Chen Ping avy any Beijing Changsong Vondron'olona hanome ny lahateny ny orinasa. Ny lahateny dia natao tamin'ny endrika "lahatenin'ny mpampianatra sy filalaovana an-dakilasy". Tao an-dakilasy, ireo mpampianatra roa dia nanadihady ary nanazava ny tsy fahatanterahany ny «big rice rice», "egalitarianism", ary "tsy mampihomehy" ao amin'ny orinasa sasany.
Ny olona no antony lehibe indrindra amin'ny tontolo iainana amin'ny mpiasa ao amin'ny orinasa iray. Izy ireo dia tsara amin'ny fitarihana sy ny antony manosika, ary afaka mandefa ny angovo lehibe nafenina ao ambanin'ny iceberg. Manatanteraka fanombanana amin'ny alàlan'ny zava-bitan'ny fampisehoana ary mamintina ny holatry ny ekipa ao amin'ny angon-drakitra dia afaka manatsara ny fahaizan'ny orinasa miasa amin'ny toerana avo kokoa.
Tamin'ny alàlan'ny tantaran'ny mpampianatra dia nifanakalo hevitra momba ny traikefa sy ny traikefa androany ny tsirairay, sy ny fomba fampiasana azy amin'ny asa ho avy hanatsarana ny fifaninanana sy ny fahaizan'ny mpiara-miasa, ary hampiroborobo ny fanatsarana ny asan'ny ekipa.
Androany, mpampianatra roa avy amin'ny vondrona Changsong no mampianatra amim-paharetana. Amin'izao fotoana izao, manana orinasam-pitantanana ny orinasa sasany, toy ny firafitry ny karama tsy mitombina ary tsy misy fomba tsara hanaovana fanombanana ny fanatanterahana izany. Amin'ny dingana manaraka, hanatsara bebe kokoa ny mekanika fanombanana ny orinasa, fanamafisana sy famerana ny akora, hanamafisana ny fampiharana sy ny fampiharana ny valin'ny fanombanana, ary hampandroso hatrany ny fanatsarana ny haavon'ny fitantanana anatiny mba hisian'ny fahombiazan'ny fahavitan'ny tanjon'ny orinasa.
Yuanxiang St. Jiangnan Zaridaina fampahalalana elektronika vaovao avo lenta Quanzhou362000, Fujian, China
Camei 2020 fitantanana fitantanana ny fampanaovana ...